Xubno iyo Saraakiil ka tirsan Al-shabaab oo lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka Shabeelaha dhexe – Radio Daljir
Xubno iyo Saraakiil ka tirsan Al-shabaab oo lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka Shabeelaha dhexe
Maarso 8, 2019 11:36 b 0
Waxa ay faah faahin dheeraad ah ay ka soo baxaysaa weerar xalay ciidamada Danab ee sida gaarka ah utababaran ee dowladda Soomaaliya ay ku qaadeen xero ku taalay Tuulada Gamboolde ee gobolka Shabeelaha dhexe oo ay Al-shabaab ku sugnaayeen.
Weerarkan ayaa waxaa loo adeegsaday laba diyaaradood oo ah nooca qumaatiga ukaca, waxaana ciidamada dowladda ka caawinay weerarkan ciidamo mareykan ah oo dusha kala socday.
Inta laxaqiijiyay 10 qof oo uu kujiro madii maaliyada ee Al-shabaab ayaa lagu dilay weerarkan.
Al-shabaab ayaa dhankooda sheegay in ay iska caabiyeen weerarkii ay ku soo qaadeen ciidaada dowladda Soomaaliya .
Dagaalkan ay qaadeen ciidaada Danab waxa uu ku soo beegmayaa xili Al-shabaab ay kor dhiyeen weerarada qaraxyada ah oo ay ka fulinayaan magaalada Muqdisho.
MAANHADAL: Cabashada Kaluumaysatada Bosaaso (dhegayso)